WordPress: Famaritana Meta Dynamic isaky ny Post | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 2, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny lohateninao WordPress default dia mamaritra famaritana tokana amin'ny pejy misy ny tranokalanao, na inona na inona pejy nidina avy tao amin'ny motera fikarohana. Ny famaritana ao amin'ny motera fikarohana dia mety tsy mamaritra ny lahatsoratra izay ao amin'ny bilaogy dia mety hiteraka olona vitsy kokoa manindry ny rohinao.
Tsy nieritreritra an'izany mihitsy aho raha tsy tamin'ity faran'ny herinandro ity rehefa naharay ity fanamarihana manaraka ity momba ny tranokalako tamin'ny BlogStorm:
Mahafinaritra, iray mora ampifandraisina amin'ny bazana! Andramo ampiana bokotra marindrano tsoratadidy sosialy eo amin'ny farany ambanin'ny hafatrao sy famaritana meta miavaka amin'ny pejy tsirairay.
Ny fananganana bilaogy toy izao dia sarotra, raha manandrana ny zava-drehetra ianao John Chow dia nanandrana dia ho eo amin'ny làlana tsara ianao.
Miaraka amina sary an-tsaina vitsivitsy sy baiting rohy be dia be ianao hahafahanao mahazo rohy ampy hahazoana laharana ho an'ny teny tena tsara (angamba efa nanao izany ianao). Raha vantany vao milahatra amin'ireo voambolana ireo ianao dia afaka mifikitra rohy afrikaina sy Adsense amin'ny pejy ary mioty ny tombony.
Ny fandinihana ny tranokalanao dia zavatra mahafinaritra satria matetika dia hamantatra olana vitsivitsy amin'ny tranokalanao izay tsy dia jerenao. Amin'ity tranga ity dia ny famaritako ny meta tag isaky ny lahatsoratro. Ny famaritana Meta dia ampiasain'ny motera fikarohana hametrahana famaritana fohy ny pejy voatanisa ao amin'ny valiny. Satria samy hafa ny fahitan'ny olona pejy rehefa mitady anao izy ireo, maninona raha mampihatra famaritana meta samihafa ho an'ny pejinao tsirairay?
Efa novaiko ny lohateniko mba hampidirina teny lakile mihetsika ho an'ny tenifototra tenifototra nataoko ary nanampy tamin'ny fanatsarana ny laharan'ny sasany tamin'ny lahatsoratro izany. Ny fampiharana ny famaritana samihafa dia mety tsy hampiakatra ny toerako amin'ny fikarohana, fa araka ny nasongadin'i BlogStorm - mety hitarika fifandraisana bebe kokoa amin'ireo pejiko avy amin'ny valin'ny fikarohana ataon'ny olona io.
Famaritana ny vahaolana
Raha pejy tokana ny pejy ao amin'ny tranonkalako, toy ny rehefa tsindrio ny tsanganana iray dia mila ampahan'ilay pejy ianao. Te hanana ilay sombintsombiny ho teny 20 ka hatramin'ny 25 voalohany amin'ny lahatsoratra aho fa mila manivana ny HTML misy antsika kosa. Soa ihany, WordPress manana fiasa izay hanome ahy izay ilaiko, the_excerpt_rss. Na dia tsy natao ho an'ity fampiasana ity aza izy io, dia fomba mahomby hampiharana ny fetran'ny teny sy hialana amin'ireo singa HTML rehetra!
Mety ho lasa lavitra kokoa aza ity ary ampiasaiko ilay Sombiny azo atao ao anatin'ny WordPress hipetrahana ny famaritana meta, fa amin'izao fotoana izao dia hitsin-dàlana milamina tsara io! (Raha mampiasa an'io fomba io ianao ary mampiditra sombin-javatra azo alain-tahaka, dia hampiasa an'io sombiny io amin'ny Meta Description).
Ny kaody lohateny
Ity fiasa ity dia mitaky ny fiantsoanao azy ao anatin'ny The Loop, noho izany dia misy pitsiny ao aminy:
FANAMARIHANA: Aza hadino ny manolo ny “Famaritana tsy misy toerana misy anao” amin'ny zavatra rehetra anananao na tianao ho famaritana meta ny bilaoginao.
Ny ataon'ity kaody ity dia manome ny famaritana meta default ho an'ny bilaoginao na aiza na aiza fa amin'ny pejin'ny Single Post, ary amin'izany dia mitaky ny 20 teny voalohany izy ary esoriny daholo ny HTML aminy. Hanohy hanohy handanjalanja ny kaody aho (manala ireo linefeeds) ary mampiditra 'raha fanambarana' raha misy sombin-kevitra azo atao. Maharaha vaovao!
Tags: famaritana meta mavitrikameta descriptionSEOWordPress
Jolay 2, 2007 amin'ny 4:16 PM
Doug mahafinaritra ity. Misaotra ny fizarana!
Jolay 2, 2007 amin'ny 5:10 PM
Tsara i Doug, manantena ny hahita an'io fandrosoana io aho. Ny ahy dia somary sahirana be amin'izao fotoana izao (heveriko), ka faly aho mahita olon-kafa manao ny asa mafy!
Jolay 2, 2007 amin'ny 8:25 PM
Fanamarihana iray - Nohavaozina ny lahatsoratra satria nihevitra aho fa mila manao lojika ianao raha misy olona mampiasa ny "Exerpt Optional" amin'ny lahatsoratra. Na izany aza, tsy mila manao izany ianao - ny Excerpt Optional dia haseho ho azy raha ampiasaina… endri-javatra mahafinaritra iray hafa amin'ny fiasa the_excerpt sy the_excerpt_rss.
Jul 3, 2007 amin'ny 7: 10 AM
Hahaha…! Te handresy an'i John Chow tokoa ianao, sa tsy izany? ^^ Tsara!
Jul 3, 2007 amin'ny 7: 30 AM
Tena tsara ny mahazo $10k isam-bolana ao amin'ny bilaogiko! Na izany aza, i John (' namana virtoaly' sy olona hajaiko tsy mampino) dia mampiasa vola be amin'ny fitandremana. Vao haingana izy no niharan'ny olana tamin'ny Google sy Technorati – mety handratra azy kely izany amin'ny fidiram-bolany any aoriana.
Saingy mankasitraka aho fa ny lehilahy toa azy dia manana ny cahonies hanosika ny fetra - mampahafantatra ny lehilahy toa ahy i John hoe aiza ny tsipika!
Jolay 3, 2007 amin'ny 11:15 PM
Fanaraha-maso fotsiny dia hitako ny All in One SEO Pack WordPress Plugin izany no hanao izany ho anao!
Hisintona ny sasany amin'ny code-ko aho amin'ity herinandro ity ary hampihatra ity plugin ity mba hitazonana ny zavatra madio. FANAMARIHANA: Hita tamin'ny Ny bilaogin'i John Chow.
Jul 4, 2007 amin'ny 11: 32 AM
Ahoana ny amin'ny fampidirana ny anaran'ny sokajy sy ny anaran'ny bilaogy isaky ny lahatsoratra…. manatsara ny lafin-javatra SEO ve izany? Izay raha ny hevitro!
Jun 17, 2008 ao amin'ny 2: 53 PM
Raha mampiasa YAPB ho vahaolana amin'ny sarinao ianao, ity kaody ity dia hisintona ny sarinao mitarika ho ao amin'ny meta ary hampiseho izany eo ambonin'ny vatana rehefa mijery ny farany.
27 Novambra 2008 à 2:19
Misaotra amin'ny kaody, nosoloiko fotsiny ny "Famaritana ny default".